GreenKhabar – पूर्वमन्त्रीको सफल कृषिकर्म
in कृषि/सहकारी / फिचर / मूलपेज / सफलताको कथा — by GreenKhabar —	January 5, 2016
केही समयअघि पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट राजिनामा दिएका एमाओवादी नेता तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर कहाँ छन् ? उनी के गर्दैछन् ? आम मानिसमा यस्तो जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । करिब पूरै जीवन राजनीतिमै बिताएका विष्ट हक्की स्वभावका थिए । पछिल्ला केही वर्षयता एमाओवादीमा देखिएको अस्तव्यस्ततासँग असहमति जनाए । र, अचेल विष्ट राजनीतिक दिनचर्यामा छैनन् ।
विष्टलाई आजकाल काभ्रेको भकुण्डेबेसीमा हाफ्पाइन्ट लगाएर खेतमा पानी हालिरहेको कसैले भेटे नझुक्किए हुन्छ । उनी तिनै पूर्वमन्त्री विष्ट हुन् । रोशी या सुनकोशीमा जाल हान्दै गरेका विष्टजस्तै कोही देखिए नि नझुक्किनुस् । उनी उनै विष्ट हुन् । आजभोलि विष्ट किसान भएका छन् । रुकुम स्थायी घर भएका विष्ट काठमाडौंस्थित काँडाघारीमा परिवारलाई राखेर काभ्रेको भुकण्डेबेसीमा कालो धान फलाएका छन् ।
सिन्धुली–काठमाडौं सडक खण्डको भकुण्डेबेसी बजार सकिनासाथ बायाँ मोडिने कच्ची सडक छ । त्यो सडक समातेर करिब सय मिटर काटे एउटा ठुलो भकुण्डे पोल्ट्रीफर्म नामक कुखुरा फर्मका लागि बनाइएको दुईतले टहरो भेटिन्छ । एमाओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता धर्मसिंह लामाको फर्म केही समययता संचालनमा छैन । गएको भुकम्पले टहरोको दुबै चौडाइका भित्ता भत्काइपछि कुखुरा छैनन् । लामाले टहरो मर्मत गर्दैछन् । सोही फर्ममा कामदारका लागि बनाइएको सानो एककोठे अर्को टहरो छ । विष्ट त्यो टहरोमा भेटिन्छन् ।
प्रायः विष्टको साथमा भेटिने लामाकै सहयोगमा विष्टले आसपासका सात ठाउँमा गरी ५३ रोपनी खेत स्थानीयसँग भाडामा लिएका छन् । त्यसमध्ये ४३ रोपनी खेतमा कालो धान ९न्टण् द्यबिअप चष्अभ० लगाएका छन् । हामीलाई साथमा लिएर गएका विष्टले हिँड्ने बेलामा हिसाब निकालेः ‘८० देखि ८५ मुरी फल्छ होला ।’ त्यसपछि भने, ‘अनुभव भएन ।’ पानीको समस्या छ । अलि तलको सानो खोलाबाट तीनवटा मेसिन लगाएर केही खेतमा पानी लगाएका छन् । ९ रोपनीमा उनले कालो भटमास लगाएका छन् ।
अलि माथि तीन रोपनीमा भने खुमलचार धान । बिउ निकाल्दैछन्– इण्डोनिसियन बोडीको । थोरै । बिउको लागि मात्र लगाएका । उक्त बोडीको लम्बाई ६०–८० सेन्टीमिटर हुने उनले जानकारी दिए । स्विट कर्न मकैको १७ गेडा ल्याएर रोपेका रे । १२ बोट मात्रै उम्रिएछ । सुनाए– यो पनि बिउलाई हो । उनका दिनचर्या आजकाल भकुण्डेमै बित्छ । उनले भने– अरुले खेत रोप्दा म बिउको व्याड राख्दैथिएँ । मानिसहरुले अचम्म माने । अरुका खेतमा धान लहलह झुल्दा उनको कालो धान बुथुरे थियो ।
कालो धानबारे थाहा नपाएका ती किसानले विष्टको खेत हेर्दै गिज्याए । विष्ट कुनै खेतको आलीमा बसेर सुने । घामले डढेका विष्टका खुट्टाका औंला पहेला थिए । उनले भने– हिलोले खायो । हिलो औषधी तेल बेसार लगाएको हुँ । फुर्सदमा जाल खेल्न दाप्चाखोला, रोशी र सुनकोशी पुग्छन् । सानो, मध्यम र ठुलो गरी तीनवटा जाल छन्, उनीसित । उनका बा खुबै जाल खेल्थे । उनी आफ्ना बासँगै जान्थे । सम्झन्छन् –सानो थिएँ, बाले एकदिन सोधे– म मरे भने यो जाल के गर्छस् रु बाले भनेछन्, ‘जाल खेल्न सिक् ।’
जनयुद्धकालमा पनि उनी जाल खेल्थे । माछा मारेर छापामारलाई खुवाउँथे । लामाले बीचमै सुनाए– दाइ कहिलेकाहीँ त रित्तै आउनुहुन्छ । विष्टले दुखेसो गरे– करेन्ट लाउने र विषादी हाल्नेले माछा मासे । उनले यसपालिको एक सिजनलाई मात्रै खेत भाडामा लिएका छन् । प्रति रोपनी ८ हजारका दरले भाडा तिर्नुपर्छ । कालो धानको नाम भकुण्डेका किसानले सुनेका त थिए तर देखेका थिएनन् ।
के हो कालो धान
धानको एक प्रजाति हो, कालो धान । समुन्द्री सतहबाट एक हजारदेखि बाईस सय मिटरको उचाईमा फल्ने यसलाई ९न्टण् द्यबिअप चष्अभ० भनिन्छ । चीनबाट आयातीत यो धानको व्यावसायिक खेती नेपालमा छैन ।
यो धान नेपाल भित्रिएको पाँच वर्ष भयो भने बिउ पाइन थालेको तीन वर्ष । केही किसानले परीक्षणको रुपमा मात्रै खेती गरेका छन् । सबैभन्दा ठुलो परिमाणमा खेती गर्ने विष्ट नै हुन् । यो धान कालो रंगको हुन्छ । धान कुटेर चामल बनाएपछि पनि यो कालै हुन्छ ।
२२ सय मिटरको उचाईमा गरिएको खेतीबाट भने यसको निक्खरता र प्राकृतिकपन (गाढा कालोपन) आउने विष्ट बताउँछन् । धान कुटेर चामल बनाएपछि यो चामलको मूल्य प्रति किलो ३–५ सय रुपैयाँ पर्छ । काठमाडौंलगायतका धनी तथा मध्यम वर्गले यसको फाइदाबारे जानेका छन् । खान थालेका छन् ।
कालो धानको फाइदा
यो धान (चामल)उच्च पोषणयुक्त हुन्छ । क्यान्सर, अल्जाइमर्स, प्रेसर, रक्तअल्पता लगायतका रोगीलाई यसले फाइदा गर्छ । मानिसको शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्छ । चीनलगायत विकसित मुलुकमा यसको प्रयोग अनिवार्यजस्तो मानिन्छ । यो चामल (प्रति व्यक्ति) एक छाकमा १५ ग्रामभन्दा बढी खान हुँदैन ।बढी खाए अपच हुन सक्छ ।
खाना पकाउँदा अन्य चामलसँग माथि उल्लेखित मात्रामा मिसाएर खाना पकाउनु पर्छ । तर यो चामल करिब १२ घण्टा भिजाएपछि मात्र अर्को जातको चामलसँग मिसाउँदा सँगै पाक्छ । यो चामलको मिसावटले पुरै भातको रंग कलेजीे हुन्छ ।
कालो धानको ठुला उत्पादक विष्ट
यसको व्यावसायिक खेती नभए पनि मागचाहिँ बढेको छ । विष्ट यसको व्यावसायिक खेती गर्ने ठुला उत्पादक किसान हुन् । उनले ३२ केजी बिउलाई ३२ हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । उनी यसपालि बिउ उत्पादन गर्न चाहन्छन् ।
उनले भने –किसानलाई फाइदाजनक र गुणस्तरीय खेतीमा आर्कषित गर्नु मेरो काम हो । त्यसैले सकेसम्म सबै खेतबाट बिउ छान्न कोसिस गर्छु र किसानकहाँ पु¥याउँछु ।
कालो धान खेतीमा कसरी पुगे विष्ट
राजिनामा दिएका विष्ट कृषिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर दाङ पुगे । केही ठाउँमा खेत हेरे । नयाँ र गुणस्तरीय खेती गर्ने सोचेका विष्ट झण्डै पाँच महिना दाङमा बसेर । जमिन र उत्पादनको अध्ययन गरे । त्यसबीचमा रुकुमका सरुण बाँठा मगरसँग उनको भेट भयो ।
उनै सरुणले करिब १३ कट्ठा खेतमा कालो धान लगाएका रहेछन् । उनैले सुनाए कालो धानको फाइदा । केही नयाँ गर्ने प्रतिवद्धताका जब्बर विष्टले तत्कालै बिउ मगाए र काठमाडौं फर्के । बिउ मगाएका विष्टसँग जमिन थिएन । युद्धकालमा काम गर्दा जमिन देखेको आधारमा एक्लै लोकल बस चढेर भकुण्डे पुगे, जमिन खोज्न । उनको उद्देश्य जमिन हेर्ने मात्रै थियो । पानी र जमिन हेर्दाहेर्दै साँझ परेको विष्टले पत्तै पाएनन् । काठमाडौं फर्कने गाडी नपाएपछि स्थानीय एमाओवादीलाई फोन गरे ।
आफू भकुण्डेचोकमा अलपत्र परेको सुनाए । तिनै साथीले भकुण्डेका धर्मसिंह लामालाई विष्ट भएको ठाउँमा लिन पठाए । त्यस रात उनै लामाको घरमा बास बसे । विष्टले आफू जमिन भाडामा खोज्न आएको बताए । लामाले प्रयास गर्छु भने । विष्ट विहानै चार बजे उठेर काठमाडौंको नयाँ बसपार्क हानिए । कारण थियो, दाङबाट धानको बिउ नयाँ बसपार्क आइसकेको थियो ।
धानको बिउ बोकेर पुनः उनी भकुण्डे फर्किए । लामासित जमिन भाडामा खोज्न निस्के । अन्ततः सहयोगी लामाको साथमा कालो धान फलाए । धर्मसिंह पनि विष्टजस्तै काभ्रे भकुण्डेका स्थानीय धर्मसिंहको पुरानो घर खनालथोक ७ मा पर्छ ।
उनले स्थानीय किसानलाई उत्प्रेरित गर्न उन्नत खेती तथा पोल्ट्री र बाख्रा पालेका छन् । उनी खोरमा भएको विटल क्रस जमुनापारी बोका ब्रिडिङ गर्ने योजनामा छन् । जसबाट नश्ल सुधार हुन्छ र उन्नत जातको बाख्रा उत्पादन हुन्छन् ।